Dr. Baadiyow oo ka digay halista muddo kordhinta | KEYDMEDIA ONLINE
Waxaa soo badanaya waxgaradka iyo aqoon yahannada Soomaaliya, ee ku baaqaya in laga hor tago damaca muddo kordhinta ee Farmaajo doonayo, taas oo dhawaan qaraar ku saabsan uu meel mariyay Golaha Shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow, oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliya, ayaa sheegay in muddo kordhinta loo sameeyay hay’adaha Sharci dajinta iyo Fulinta ay tahay sharci darro, burbur iyo barakac sababi karta.
Guddoomiye ku-xigeenka National Forum Party ‘NFP’, ayaa tilmaamay in muddo kordhin iyo doorashooyin boob ah ay sababi doonaan dagaallo sokeeye, isla markaana ay wiiqayaan kala danbeynta, amniga iyo dimuqaariyadda.
“Muddo kordhinta lagu dhawaaqay ee hay'adaha la doorto ee dalka, waxey wiiqaysaa sharciyadda, midnimada iyo dimoqaradiyadda. Waxaa ka dhalan kara dagaal sokeeye.” Ayuu yiri Dr. Baadiyow.
Dadka, la dhacsan, muddo kordhinta ayuu ugu baaqay in ay indhaha kala furaan, ogaadaanna in jidka Farmaajo qaaday uu yahay mid horseedi doona kala haad mar kale ka dhaca Soomaaliya.
“Inta niyadda san oo aan ogeyn waxa ka dhalan kara tilaabadaas, ha ogaadeen iney waddo khaldan u horseedeen dalka”.” Ayuu yiri Dr. Baadiyow.